कोरोना भाइरस हावाबाट नभई ब्यक्तिबाट सर्छ : डा. खत्री « Online Rapti
कोरोना भाइरस हावाबाट नभई ब्यक्तिबाट सर्छ : डा. खत्री
अनलाइन राप्ती २०७६ फाल्गुन २३ गते शुक्रवार
तुलसीपुर, तुलसी हस्पिटलका प्रमुख एवं नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्रीले कोरोना भाइरसले हावाबाट सर्ने नभई मानिसहरुबाट सर्ने बताए । शुक्रबार एस.टि.एन च्यानलको समय र सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै उनले यो रोग जनावरबाट मानिसलाई सरेको र अहिले मानिसबाट नै सरेर े संक्रमण बढ्दै गएको बताए ।
संक्रमित ब्यक्तिसंग स्वस्थ ब्यक्तिले हात मिलाउँदा, उसंग नजिक हुदाँ यो रोग सर्छ, उनले भने । नेपालमा अहिले सम्म चिनबाट आएका एक जना विद्यार्थीलाई देखिएको भएता पनि उनको उपचार भैसेको र अहिले नेपालमा कसैलाई नभेटिएको उनले बताए । त्यसैगरी उनले यो रोगको अहिले सम्म कुनै औषधी नभएको भएता पनि विरामीहरुको अवस्था कस्तो छ ।
त्यसै अनुसार उपचार गर्न सकिने बताए । यो रोगका लक्षण ३ प्रकारका हुन्छन्, धेरै ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु र श्वास प्रश्वास फेर्न गाह्रो भएका कोरोनाको लक्षण हुन सक्छ । त्यसैगरी उनले यो रोग लागेमा सय मा दुई प्रतिशत मात्र विरामीको मृत्यु हुने बताए । दिर्घरोगी, विरामीको रोगसंग लड्न सक्ने शक्ति नभएको भए त्यस्ता ब्यक्तिले समय मै उपचार नभए मृत्यु हुन सक्छ, उनले भने , तर सबैलाई रोग लागे मृत्यु हुदैन् ।
त्यसैगरी यो रोगको लक्षण १४ दिन सम्म देखिन नसक्ने भएकाले कुनै विरामीहरुलाई शंका लागेको उसले आईसुलेसन (सहायता) कक्षमा बसेर उपचार गर्नु पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी यो रोग लागेमा फोक्सो, कलेजो, मृगौलामा असर गर्ने र अन्त्यमा मृत्यु हुने उनले बताए । त्यसैगरी उनले यो रोगबाट बच्नको लागी साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुने, कसैलाई रुघाखोकी लागेको छ भने, त्यस्ता ब्यक्तिको नजिक नजाने, धेरै भिडभाडमा नजाने, बाहिरको खाना नखाने, माक्स लगाउने गरेमा रोगबाट बच्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी उनले भाइरस धेरै तातोमा नबाच्ने भएकाले तातो झोल पदार्थ पिउने, ज्वरो आएमा ज्वरोको औषधी खानु पर्ने समेत बताए । त्यसैगरी उनले नेपाल यो भाइरसको उच्च जोखिम भएकाले सबै सचेत हुनु पर्ने बताए ।
चिनबाट शुरु भएको यो रोग भारतमा पनि देखिएकाले नेपालमा उच्च जोखिम छ, उनले भने , ‘तर हामीले त्यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा जानु हुदैन् ।’ त्यसैगरी यो भाइरस ईनफेक्सन भएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको समेत बताए ।
यसबाट आतंकित हुने पर्ने अवस्था नभएपनि साबधानी अपनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । त्यसैगरी उनले यस रोगको बारेमा आम नागरिकहरुलाई जानकारी दिन सके जोखिम कम हुने समेत बताए ।